3 ธ.ค. 2562 - 18:00 น.
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ၄ နှစ်ကြာကြိုးစားနေချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ စစ်မီးတွေအရှိန်မြင့်တက်လာပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးနောက် မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ အသေးစားပစ်ခတ်မှုကလွဲပြီး သေနတ်သံတွေ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ ယမ်းငွေ့တွေ ဝေနေခဲ့ပါတယ်။
အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ အဖြေရှာနေချိန်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေ၊ တအာင်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ TNLA တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။
၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတပ်မတော် နဲ့အေအေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အရပ်သား ၉၀ လောက်သေဆုံးခဲ့သလို ၁၄၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၁၅၀ လောက်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအရှိန် လျော့ကျသွားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေရတာလဲဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်သူတချို့က ဆိုပါတယ်။
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတည်ဆောက်ရာမှာ သီအိုရီလောက်သာနားလည်တဲ့လူတွေ ဦးဆောင်နေတာ တွေ့ရပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အဖွဲ့ (working force) မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှေ့မတိုးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရတယ်လို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတချို့က သုံးသပ်ကြပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ နီးနီးကပ်ကပ်တပ်စွဲထားတဲ့နေရာတချို့
ဒါ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ လက်ရှိအစိုးရအကြား ဆက်ဆံရေးပြေလည်ဖို့ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
အရင်က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံ မှုတွေ ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ကြပြီး သဘောမတူတာတွေကို ညှိနှိုင်းရယူခဲ့ပြီးမှ တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲ ကို ကျင်းပလေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူတွေက ထောက်ပြပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုမှု၊ တပ်မတော်ဘက်က လိုက်လျောပေးနိုင်မှုနှစ်ခုအကြားမှာ အလျှော့အတင်းလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့တပ်မတော်အရာရှိနဲ့ အဲဒီအချိန်တုန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဆီက အတည်ပြုချက်ယူပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံပွဲကို တရားဝင် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာတင် ဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရုံပဲလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေက ဆိုပါတယ်။
တအားန်အဖွဲ့နဲ့ ရှမ်းမြောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပွား
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်က ဒီလိုကြားက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ယန္တရားကို အသက်ဝင်အောင် လုပ်ထားနိုင်ခဲ့လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် မှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ရှိလာ ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီး ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွာသားတွေ အိုးအိမ်စွန့်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပြင်းထန်လာပြီး အရပ်သားတွေလည်း ဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလို အေအေရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ TNLA နဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်မျက်နှာထပ်ဖွင့်လိုက်ပြီး တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မန္တလေးနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆင်နွှဲလာပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးအနေအထားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေရှိနေပေမယ့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် ညှိနှိုင်းလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။
လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မတော်အကြား တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်မစနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေရတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးအောင်နိုင်ဦး က ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုအနေအထားဟာ အေးခဲသွားတဲ့ပဋိပက္ခလို့ဆိုနိုင်ပြီး ဒီအနေအထားကနေ ရှေ့တိုးနိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
အေးခဲနေတဲ့ပဋိပက္ခဟာ တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေက လက်နက်၊ လူအင်အားစုဆောင်းတာ၊ စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေရှိနေလုပ် နေကြပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်မစနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ ကြာလာရင် တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ စစ်ရေးအရှိန်ပိုပြီးပြင်းထန်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လို့ ဦးအောင်နိုင်ဦးက မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပြည်တွင်းစစ်ကြားက မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအချိုးအကွေ့